Maxaa Laga Sameeyay Suuqa Isbarbar Socda Ee Nigeria | Tilmaan Buuxo
Bogga ugu weyn Maxaa Laga Sameeyay Suuqa Isbarbar Socda Ee Nigeria | Tilmaan Buuxo
Waxaa jira dad aad u yar oo dhihi kara ma aysan maqlin waxa lagu sameeyo suuqa isbarbar socda ee Nigeria. Suuqan madow wuxuu ahaa.
Isla markii wasiirkii maaliyadda ee ugu horreeyey ee Nigeria Chief Okotie Eboh, illaa 1966, Nigeria waxay lahayd khasaare ganacsi oo joogto ah. Suuqa isbarbar socda ayaa halkaas ka koray.
Waa aqoon guud oo arday kasta oo dhaqaalaha iyo taariikhda leh in ganacsigu saamayn ku yeesho dalabka lacagta, taas oo iyaduna gacan ka gaysata wadidda qiimaha lacagta.
Suuqa isbarbar socda ayaa muhiim u ah dad badan marka la eego in ay tahay sheeko dhab ah oo xaqiiqda ka badan waxa ay sheegtay hay'adda sharciyeynta maaliyadeed ee aasaasiga ah ee dalka, bangiga dhexe.
Maqaalkani wuxuu ka hadlayaa waxa laga sameeyo suuqa isbarbar socda, waxa abuuraya suuqyo isbarbar socda ama madow, iyo sida uu quseeyo sarifka.
Yaraanta sahayda ayaa ka dhigtay suuqa isbarbar socda waxa uu hadda yahay. Suuqa madow sida loogu yeero waa meesha ay dad badani u tagaan si ay u daboolaan baahidooda dhaqaale.
Waa meesha uusan ceelku gebi ahaanba qallajin. Halganka aan dhammaadka lahayn ee dollar -ka ee doolarku waa sheeko carruurta shalay dhalatay ay yaqaanaan.
Halganka u dhexeeya naira iyo doolarka ayaa loo adeegsaday doorasho kasta tan iyo 1957 -kii.
Dagaalkan u dhexeeya naira iyo doolarka ayaa dadka qaar siiyay awood ka badan intii ay ku riyoon jireen inay suurtogal tahay.
Waxay hoos u dhigtay shaqsiyaad ka soo baxay qiimahoodu malaayiin doolar.
Nidaamka maaliyadeed ee Nigeria
Himilada a nidaam dhaqaale oo wanaagsan waa in kor loo qaado iskaashiga ka dhexeeya dhammaan xubnaha ka qaybgalaya.
Nidaamka maaliyadeed waa dhex -dhexaad u dhexeeya dhammaan qeybaha ka shaqeeya dhammaan qeybaha oo hubiya inay u dhaqmaan si dadka oo dhan waxtar u leh.
Nidaam maaliyadeed oo shaqeynaya wuxuu saameeyaa dhaqaalaha oo dhan wuxuuna suurtogal ka dhigayaa horumarka qaybaha badankood.
Nidaamka maaliyadeed ee Nigeria wuxuu u qaybsan yahay laba - qaybta hoose ee rasmiga ah iyo waaxda aan rasmiga ahayn.
Qaybta rasmiga ahi waxay ka kooban tahay hay'adaha sharciyeynta, suuqa lacagta, suuqa raasumaalka, suuqyada sarrifka lacagaha qalaad;
shirkadaha dilaalnimada, shirkadaha caymiska, bangiyada lacagta dhiga, bangiyada horumarinta, iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed.
The boodhka sharciyeyntaies waxay ka kooban yihiin Wasaaradda Maaliyadda Federaalka, Bangiga Dhexe, Guddiga Amniga iyo Sarrifka, Isweydaarsiga saamiyada ee Nigeria;
Guddiga Caymiska Qaranka ee Nigeria, Shirkadda Caymiska Kaydka ee Nigeria, iyo Bangiga Mortgage of Nigeria. Kuwani waxay nidaamiyaan waxqabadyada inta kale.
Qaybta aan rasmiga ahayn waxay ka kooban tahay kooxo iskaa wax u qabso ah, iskaashatooyin maaliyadeed, iyo ururada deynta.
Waa marka hawlaha maamulayaasha iyo kuwa kale aysan buuxin karin dalabyada ah inay booqdaan suuqyada isbarbar socda si ay wax u qabtaan.
Sidoo kale akhri: Habka ugu Wanaagsan ee Loo Maalgashan Karo $ 10,000: Siyaabo Cusub Oo Lagu Kordhiyo Ilaa 5x Lacagtaada
Suuqa isbarbar socda
Suuqani waa hawl maaliyadeed oo ka dhacda meelo ka baxsan kanaalada ay dawladdu fasaxday.
Suuqan isbarbar socda ayaa ah mid ay ka buuxaan hawlo aan caadiyan dawladdu oggolaan doonin.
In kasta oo dad badani rumeysan yihiin in dhaqdhaqaaqyada ka socda suuqa isbarbar socda ee Nigeria ay gacanta ku hayso dowladda, taasi maahan runta oo dhan.
Wakiillada gaarka loo leeyahay ee gaadhi kara ayaa iyaguna ka ganacsada kana faa'iidaysta isu -dheelitir la'aanta iyo kor -u -kaca iyo hoos -u -dhaca nidaamka dhexdiisa.
Sida kiiskii Kolombiya iyo Guyana, horumarinta suuqa madow ee lacagaha ayaa ka dhashay dhaqdhaqaaqyo la xiriira daroogada.
Tan micnaheedu ma aha in dawladuhu ay gebi ahaanba xor yihiin in kastoo, mararka qaarkood suuqyada isbarbaryaaca waxaa abuura dowladda sababo wanaagsan awgood.
Suuqyada isbarbar socda ayaa dhibaato ku ah dalal badan, waa wax caadi ah laakiin kuma koobna dalalka soo koraya.
Maxaa keena suuq isbarbar socda?
Waxyaabo badan ayaa sababi kara suuqyo isbarbar socda, oo ay ugu weyn yihiin arrimaha bixinta sarifka lacagaha qalaad, arrimaha lacag bixinta, iyo xakamaynta qiimaha dawladda.
Xaaladaha qaarkood, dawladuhu waxay ka jawaabaan dheelitirka xiisadaha lacag bixinta iyagoo abuuraya suuq isweydaarsi sharciyeed oo isbarbar socda (ama laba) macaamil maaliyadeed.
Ujeeddadu waa in laga fogaado saamaynta muddada-gaaban ah ee hoos-u-dhaca qiimaha sarrifka ee sicirka gudaha iyada oo la ilaalinayo xoogaa xakamayn ah soo-bixidda raasamaalka iyo kaydka caalamiga ah.
Xaaladaha kale qaarkood, kontaroolada ballaaran ee sarifka lacagaha qalaad ayaa xaddidaya gelitaanka suuqyada rasmiga ah waxayna horseedaan soo bixitaanka suuq isbarbar socda.
Suuq isbarbar socda ayaa la abuuraa marka hay'adaha sharciyeynta sida bangiga dhexe ay ku sarbeebaan sicirka sarrifka qaddar gaar ah oo ay u oggolaadaan oo kaliya koox yar oo dhex -dhexaadin ah oo la oggol yahay inay galaan macaamil ku lug leh sarrifka shisheeye.
Iibinta lacagahan qalaad hadda waxaa loo xaddiday kaliya sababaha loo arko inay lama huraan yihiin sida bixinta dheelitirka iyo horumarka dhaqaalaha.
Si loo qanciyo dalabka xad -dhaafka ah ee lacagaha qalaad, qayb ka mid ah lacagta xaddidan ayaa la kaxeeyaa oo lagu iibiyaa qiime ka sarreeya heerka caadiga ah.
Qiimaha suuqa isbarbar socda ayaa hadda ku tiirsan arrimo ay ka mid yihiin qaab -dhismeedka ciqaabta iyo sida ay mas'uuliyiintu ugu heellan yihiin qabashada iyo maxkamadeynta dembiilayaasha.
Marka, maxaa lagu sameeyaa suuqa isbarbar socda ee Nigeria?
Investopedia si fiican u dhigaysa tan marka ay ku tilmaamayso suuqa madow “goobo ay ku yaalliin waxyaabo si aad ah loo kontoroolo ama alaabooyinka sida daroogada iyo hubka si sharci -darro ah looga ganacsado.
Suuqyada madaw waxay saamayn ku yeelan karaan dhaqaalaha maadaama ay yihiin suuqyo hadh ah oo aan dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha aan la diiwaangelin, canshuurna aan la bixin.
Xaaladda maaliyadeed, suuqa madow ee ugu weyn ayaa u jira lacagaha waddammada leh kontaroolada lacagta adag. ”
Suuqa isbarbar socda ee Nayjeeriya waa meel ay dadku u jeestaan ​​marka ay ka dhammaadaan fursadaha oo ay u baahan yihiin kaalmo dhaqaale.
Nooca kaalmada maaliyadeed ee ay ka heli karaan oo kaliya meelaha aan la diiwaangelin iyo qiimayaasha laga yaabo inaysan caddaalad ahayn laakiin ay ka fiican yihiin haba yaraatee.
Twuxuu isbarbar socda suuqa Nigeria waa wax soo saarka tallaabooyin la qaaday si looga fogaado xakamaynta taas oo horseeday ballaarinta suuqa sharci darrada ah ee badeecadaha iyo lacagaha.
Waa maxay sicirka sarrifka suuqa ee isbarbar socda?
The sicirka sarrifka suuqa oo barbar socda waa mid ay go'aamiyaan xoogagga suuqyadu oo aan la fiirin.
Nigeria gudaheeda, dareereynta hoose ee daaqadda rasmiga ah ee aad u jaban waxay la macno tahay in kuwa u baahan doollar ay u hoggaansamaan suuqa isbarbar socda, taasoo ka dhigaysa dib u soo noqoshada qaali.
Sicirka sarrifka suuqa ee isbarbar socda marba marka ka dambaysa wuu kala duwanaa wuxuuna inta badan ku tiirsan yahay xaaladaha markaas jira.
Maxay tahay wax u gaar ah suuqa isbarbar socda ee Nigeria?
In kasta oo dadka badankiisu ay ka fogaan karaan suuqa madow sababta oo ah waxay u arkaan inay hurdo tahay, haddana waxaa jiri kara marar dhif ah oo aysan haysan wax kale oo ay doortaan mooyaane inay u leexdaan sharkan lagama maarmaanka ah.
Tani waa hal dariiqo oo dadku sameeyeen 10 jeer lacagta waxay geliyeen.
Suuqa isbarbar socda ee Nayjeeriya waa mid had iyo jeer firfircoon sababtoo ah dhaqaalaha Nigeria oo aad u deggan.
Laga soo bilaabo 1999 -kii, Nigeria waxay aragtay inay ka sii gudubtay hal dhibic una gudubtay mid kale.
Suuqa isbarbar socdaa ma yahay tilmaame wax kasta?
Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa laga soo xigtay isagoo leh “suuqa isbarbar socda inta aan ognahay iyo xogta aan hayno waa suuq gacmeed oo ku yaal Nigeria oo aan ka badnayn boqolkiiba 5 saamiga suuqa.”
Tani waxay tilmaan u tahay in saamiga suuqa ee suuqa isbarbar socda uu si dhib leh uga sarreeyo kuwa badan oo jeclaan lahaa inay qiraan.
In suuqa isbarbar socda uu kobcayo waxay tilmaan u tahay xaqiiqda ah in bangiga dhexe uusan awoodin ama uusan diyaar u ahayn inuu daboolo dhammaan dalabka sarifka lacagaha qalaad ee sarifka rasmiga ah.
Boqolkiiba suuqa maaliyadeed ee suuqa isbarbar socdaa uu ku yaal Nigeria waa weyn yahay.
Si aad u badan si CBN aysan u qarin rabitaankeeda ah inay xirto farqiga ballaaran ee u dhexeeya sicirka sarrifka rasmiga ah iyo sicirka suuqa ee isbarbar socda.
Waa calaamad muujineysa in arrimuhu aysan ahayn sidii la rabay, iyo inay jirto shaqo la qabanayo.
Ma laga faa'iidaysan karaa suuqa isbarbar socda ee Nigeria?
Aad iyo aad. Maaddaama waxyaabo badan labadii sano ee la soo dhaafay ay heleen xannibaadyada forex, kuwa u baahan FX si ay u fuliyaan macaamil ganacsi waa inay raadsadaan beddello, beddelkanna waa suuqa isbarbar socda.
Si aad u siiso tilmaam ku saabsan dabeecadaha xaddidaadda, kuwa haysta oggolaanshaha FX si ay u fuliyaan macaamilkooda waxay sidoo kale ku adkaataa inay ka helaan bangiyada iyo hawlwadeennada BDC xadadka ay dejiyeen ganacsadaha idman.
Tani waxay ka dhigeysaa suuqa isbarbar socda inuu sii kobco oo xitaa wuxuu sii kordhiyaa qiimaha doolarka oo ka sarreeya naira marka loo eego baahida.
Suuqa ayaa ah in kuwa u baahan lacag falalka sharci -darrada ah ay tagaan suuqa isbarbar socda si ay u maalgeliyaan.
Dhibaatooyinka amni iyo dhaqaale ee Nigeria waxaa sii xumeeyay helitaankaan sarifka lacagaha qalaad ee suuqa isbarbar socda.
Waxay aad u badan tahay in guddoomiyaha bangiga dhexe ee Nigeria Godwin Emefiele uu yahay sida laga soo xigtay hadalka suuqa isbarbar socdaa waa “suuq sumeysan Nigeria.
Waa meesha dadka doonaya inay wax ka qabtaan macaamilka sarrifka lacagaha qalaad ee sharci -darrada ah oo ay ka mid yihiin soo -saaridda kaashka FX si loogu bixiyo laaluush, musuqmaasuq, waa meesha ay wax ka qabtaan. ”
Wax kasta oo ay yihiin sababaha keena suuqyada isbarbar socda, hal shay waa hubaal.
Baaxadda suuqa isbarbar socda waxay ku xirnaan doontaa baaxadda macaamil ganacsiyeedyada ku xiran kontaroolada isdhaafsiga iyo heerka xaddidaadda la dhaqan gelinayo.
Sida xaalku yahay wax kasta oo hoos imanaya sharciyada dhaqaalaha oo ah dalab iyo keenis, mid baa go'aamiya sida kan kale u raaco.
Dalalka leh kayd ku filan halkaas oo lagu daboolay baahida sarrifka lacagaha qalaad, inta badan, suuqa isbarbar socda ayaa sii ahaan doona ciyaartoy yar.
Dhanka kale, waddammada ay ku yaalliin kaydad aan ku filnayn oo dheelitirka dhimista lacag -bixinta ayaa sii dheeraata oo soo noqnoqda, suuqyada lacagta ee isbarbar socda ayaa si fiican loo horumarin doonaa loona habeyn doonaa.
Waxa Lagu Sameeyo 100k Nigeria | Fikradaha Ganacsi ee Ugu Fiican
Waxaan rabaa in la i siiyo lacag si aan u guursado ajnabi sanadka 2020: 4 shay oo ay tahay inaad had iyo jeer ogaato
Ganacsiga Forex ee Nigeria | Tilmaame Talaabo-Talaabo Buuxa ah ee Bilowga ah
Sidee shirkadaha kaarka deynta lacag u helaan? Waxaan haynaa 5 Siyaabood oo la Xaqiijiyay
15 Shirkadaha Ganacsiga Badeecadaha Ugu Fiican Adduunka
13 Sameeyayaasha onlaynka ah ee ugu Fiican 2022: Hagaha Khabiirka
15 Barnaamijyada Shukaansiga ugu Fiican Hindiya 2022
Hindiya had iyo jeer waxay ahaan jirtay aasaaska dhaqanka. Haddaba, sababta keentay in guurku uu noqdo mid la isku halayn karo…
Sidee ayay tahay in biilkayga raashinka celcelis ahaan uu noqdo ka dib Faafida?
Faafida cusub ee COVID-19 ayaa ku fiday xawli naxdin leh, taasoo saamaysay malaayiin waxayna keentay dhaqdhaqaaq dhaqaale…
Bangiyada ugu Fiican Maryland 2022 | Heerarka, Noocyada Xisaabta, Min. Debaajiga
Maryland waxay caan ku tahay waxyaabo badan oo warshadeeda Bangi waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan…
Sida Loo Maalgaliyo $ 1,000 Si Lacag Loogu Sameeyo | 2022 Liis Cusub
Dakhliga dhismuhu wuxuu u baahan yahay inaad geliso kanaalo lacag-samayn oo kala duwan. Waa inaad awood u yeelatid inaad dhisto durdurro…
Sida Loogu Sameeyo Lacag Suuqa Suuqa 2022: Tilmaan Buuxo.
Lacag ka sameynta suuqa saamiyada ma ahan mid adag sida ay u muuqato gaar ahaan marka aad leedahay wanaag…